रसुवा नुवाकोटमा यिनलाइ सम्मान नभएको गुनासो::RATONEWS
रसुवा नुवाकोटमा यिनलाइ सम्मान नभएको गुनासो
भूकम्पपश्चात राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संघ (नीट –नेपाल) को आयोजनामा संस्थाका सक्रिय सदस्य, रसुवा नुवाकोट पर्यटन समाजका अध्यक्ष तथा समाजसेवी बलराम न्यौपानेको नेतृत्वमा एक टोली क्षतविक्षत पर्यटकीय स्थल रसुवास्थित लाङटाङ गएको थियो ।
राजधानीस्थित सोह्रखुट्टेबाट बलराम न्यौपानेको नेतृत्वमा पत्रकार अशोक सिलवाललगायतको टोलीलाई विदाई गरिएको थियो । त्यसताका छिनछिनमा भूकम्पका परकम्पनहरु गईरहेकै थिए ।
लाङटाङ आफैँमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त भएकामा जानसक्ने स्थिति थिएन । न्यौपानेको नेतृत्वमा उक्त टोली लाङटाङ पुग्दा रसुवाका सिडिओ र डिएसपीले न्यौपानेलाई लाङटाङ जानसक्ने स्थिति नभएको र जोखिमको स्थितिमा त्यहाँ नजान सुझाएका थिए । आफू उक्त क्षेत्रको जानकार रहेको भन्दै न्यौपाने आफ्नो मिसनमा चुक्नुभएन । लाङटाङकै केही स्थानियहरुको सहयोगमा उक्त टोली लाङटाङ गएको थियो ।
भूकम्पपश्चात लाङटाङ क्षेत्रको वस्तुस्थितिको अवलोकन गरेर फर्केपछि उक्त टोलीका एक सदस्य पत्रकार सिलवालले निर्देशन गरेको ‘घर फर्किरहेका मान्छे’ र ‘वेकिङ एण्ड वाकिङ’ नामक दुई बृतचित्र नेपाल पर्यटन बोर्डमा प्रदर्शित भए ।
तर, जसले यति ठूलो जोखिम मोलेर लाङटाङ पुग्ने टोलीको नेतृत्व गरे, उनै न्यौपानेको नाम भने रहस्यमा राखिएको छ । उनी नगएको भए उक्त काम सहज हुने थिएन । तर, उनको नाम हालसम्म पनि कतै जोडिएको छैन् ।
आफ्नै नेतृत्वमा जाँदासमेत उनको नाम किन आएन ? नीटले किन सम्मान दिएन वा सोको आवश्यकता ठानेन ? पर्यटन बोर्डका हलमा कार्यक्रम हुँदासमेत उनको नाम किन आएन ? नीटले गरको यो उनको अपमान हो । नेतृत्व लिनेको किन नाम लिईएन ? यसप्रति रसुवाबासीले द :ख प्रकट गरेका छन् । गन्तव्य नेपाल